Aloe Soothing Gel - 300ml
About Productသဘာဝရှားစောင်းလက်ပတ်လေးမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့အသားအရေလှပဖို့သုံးတဲ့ သဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်း အဖြစ်လူသိများကြပြီး Cosnu Aloe Soothing Gel လေးကလည်း ရှားစောင်း (98%) ပါဝင်ပြီး Mineral Oil Free ဖြစ်ခြင..
Anti-Aging Shampoo - 300ml
သဘာဝပုလဲနက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ဆံပင်၏ပျက်ဆ်ီးခြင်းများကိုအရင်းကနေအဖျားအထိ ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီးဆံပင်ကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်စွမ်းမြင့်များသောကြောင့် လူကြိုက်အများဆုံး ခေါင်းလျှော်ရည် လေးပါရှင့်။ပျော့..
Anti-Aging Shampoo - 750ml (Get Anti-Aging Shampoo - 300ml)
Cherry Body Lotion 500ml
Cucumber Facial Foam 180ml
About Productရေဓါတ်ပေါကြွယ်ဝသော ဆေးဘက်ဝင်သခွားသီးများကို အဓိကထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသားအရေကိုအေးမြလန်းဆန်းစေခြင်း၊ရေဓါတ်ကိုအဓိကဖြည့်တင့်ပေးသောကြောင့် အသားအရေကိုစိုပြေဝင်းမွတ်စေသည့်အပြင် အသားအရေခြောက်သ..
Grape Body Lotion 500ml
GreenTea Facial Foam 180ml
About Productလက်ဖက်စိမ်းကိုအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်း ၊ အဆီပြန်ခြင်း တို့ကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ကုသပေးပြီးဝက်ခြံ ၊ ဆားဝက်ခြံ ၊ အဆီကျိတ်များကိုဖြစ်ပေါ်မလာအောင်တားဆီကာကွယ်ပေးသောကြာင..
စေးကပ်ခြင်းလုံးဝမရှိပဲ ဆံပင်ကိုအရင်းမှ အဖျားထိသန်စွမ်းနက်မှောင်စေသော Hair Essence ဖြစ်ပါတယ်။ရှားပါးလှသော ပင်လယ်ရေညှိ နှင့် ထောလပတ်အရွက်များဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဆံသားရဲ့ လိုအပ်သော ဓာတ်ကိုအပြည..
Lotion Big - 200 ml
About ProductApply sparingly over your body and pat gently to allow better absorption. Use twice daily both in the morning and at night.Body Lotion isalotion that calms and soothes the discomfort as..